Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 5)
Apple waxay iibsataa shirkad 3-4 toddobaad kasta
Sida laga soo xigtay Tim Cook shirkii ugu dambeeyay ee saamileyda, Apple waxay iibsatay in ka badan 100 shirkadood 6-dii sano ee la soo dhaafay.
Jon Prosser wuxuu miiska saarayaa naqshad iMac ah oo aad u fiican sanadkaan iyo midabbo kala duwan
Berri 26-ka waxaa lagu qaban doonaa furitaanka Dukaanka labaad ee Apple ee Seoul (South Korea) ee Yeouido
12 × 20 Podcast: Dhacdada Maarso ... Ama Maya
Hal wiig oo dheeri ah ayaan dhamaantiin idinla wadaageynaa qeybta cusub ee #PodcastApple
Soo noqoshada Jon Stewart ee telefishanka ayaa bilaabeysa inay qaab yeelato
Wariyaha Hollywood ayaa daabacay macluumaad dheeri ah oo laxiriira Jon Stewart mashruucisa cusub ee Apple TV +
Spotify HiFi wuxuu noqon doonaa mid dhab ah sanadka 2021 oo dhan
Inta lagu jiro 2021-ka, Spotify waxay soo saari doontaa nooc HiFi ah oo ah adeegga muusikada qulqulka, inkasta oo xilligan aynaan garanayn qiimaha iyo helitaanka
Soosaarida dariiqyada miniLED ee iPads Pro iyo MacBooks ayaa bilaabmaya
Soo saarida kumbuyuutarrada Mini-LED ee loogu talagalay iPads Pro iyo MacBooks ayaa bilaabmaya. Waxay ku bilaabi doonaan kuwa loogu talagalay iPad-ka si ay ugu sii wataan kumbuyuutarrada loo yaqaan 'Mac'.
Dhibaatooyinka qaar ka mid ah SSD-yada qaar ee 'Mac M1' xitaa wey dhaawici karaan kumbuyuutarka laftiisa
Isticmaalayaasha ayaa ka warbixinaya arrimaha la socda M1 Mac SSDs taas oo sababi karta waxtarkooda inuu si aad ah hoos ugu dhaco
Mitsubishi's moodooyinka cusub ee 'Outlander' waxay keeni doonaan CarPlay wireless
Nooca afraad ee Mitsubishi's moodooyinka Outlander ayaa keenaya CarPlay wireless laga bilaabo bisha Abriil ee sannadkan
Boostada rasmiga ah ee Apple ee midabada qaanso roobaadka ayaa u kacaysa xaraashka
Sheygii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple ee xaraashka waa calaamadda methacrylate ka hor 80-kii.
Apple Pioneer Place ee Portland wuxuu furmayaa 9 bilood kadib
Dhamaadka iyo 9 bilood kadib, Apple Pioneer Place ee Portland waxay albaabada u fureysaa qof walba, iyadoo la ilaalinayo tallaabooyinka amniga
25-ka Febraayo, Apple waxay martigelin doontaa munaasabad 3-madal ah oo loogu dabaaldegayo sii deynta dokumenteriga cusub ee ku saabsan Billie Eilish
Dhowr xanta ayaa soo jeedinaysa in Apple ay ku dari karto HDMI isku xirayaasha iyo kaarka SD ka akhrista ee MacBooks-ka cusub
Apple waxay bilaabi kartaa adeegyadeeda lacag bixinta iyada oo loo marayo Apple Pay ee Mexico maanta
Apple wuxuu xakameynayaa furinka "Silver Sparrow" ee beegsanaya Mac M1s
Apple wuxuu xakameynayaa furin "Silver Sparrow" oo bartilmaameedsanaya M1 Macs. Koodhka xaasidnimada ah durba waa la xakameynayaa.
AirPods 3 wali waxay kujiraan wararka xanta ah iminkana muuqaal ah suurto gal sameecadaha samafalka ee Apple ayaa lagu muujiyay dhexda 52 Audio
Dhibaatada ugu dambeysa ee garaafka ee lagu ogaadey Mac Mini-ga cusub ee leh M1 processor wuxuu muujinayaa pixels casaan ah shaashadda markii la isticmaalayo isku xirnaanta HDMI
Xilli ciyaareedkii labaad ee Mythic Quest wuxuu horey u leeyahay taariikh la sii daayo Apple TV: Meey 7, 2021.
Browser-ka Chrome wuxuu cunaa RAM aad uga badan kan Safari ee macOS Big Sur
Sida laga soo xigtay tijaabooyinka lagu qaaday biraawsarka Chrome ee macOS Big Sur, waxay isticmaashaa ilaa 10 jeer RAM ka badan Safari
Tilmaamaha Amniga Apple Updates ee macOS 11 Big Sur, Mac leh Apple Silicon, iyo Inbadan
Apple waxay cusbooneysiisay hagaha amniga aalado badan oo Apple ah laakiin waxay diiradda saaraysaa macOS Big Sur iyo Apple Silicon
Malware cusub oo loogu talagalay Mac oo leh M1 ayaa la ogaaday laakiin cawaaqib xumo wali lama helin
Cilmi-baarayaashu waxay soo heleen Malware cusub oo loogu talagalay Mac-yada leh M1. Kani waa kii labaad ee uu ku jiro mana noqon doono kii ugu dambeeyay.
Su'aalo-weydiinta shaqooyinka ee xaraashka, yaraynta khayaanada iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal usbuuc ka badan waxaan kuu soo qaadaneynaa qaar ka mid ah wararkii ugu cajiibka badnaa ee aan ka imid Mac
Jane Fonda ayaa mas'uul ka noqon doonta duubista mid ka mid ah jilaayaasha filimka filimka ee 'Luck for Apple TV +'
Daraasad cusub ayaa doonaysa inay ogaato haddii saacadda Apple Watch iyo dareemaheeda oksijiintu ay awood u leeyihiin inay ka digtoonaadaan wax qabad la'aanta hore ee wadnaha
Sida ku xusan wararka xanta ah. waxaan lahaan laheyn dhacdo Apple ah bisha Maarso inkasta oo aynaan ogeyn taariikhda ay leedahay.
Tim Cook wuxuu ku andacooday in 2020 uu ahaa sanadkii ugu fiicnaa ee hal-abuurnimada taariikhda Apple. Wuxuu usheegay isbuucaan wareysi dadweyne.
Maxaa ku cusub khariidadaha Apple Maps ee UAE oo leh faahfaahinta hagista ama ikhtiyaarka lagu helo Uber
Xafiiska 2021 ayaa imanaya macOS kahor dhamaadka sanadka
Microsoft waxay shaacisay in Office 2021 uu imaan doono kahor dhamaadka sanadka dhamaan macaamiisha aan wali aaminin daruuraha
13 ″ MacBook Pro oo leh M1 wuxuu noqdaa mashiinka ugu fiican ee tafatirka sawirada
Tijaabinta sawir qaade xirfadle ah ayaa muujinaya tirooyin aan caadi aheyn oo loogu talagalay 13 "MacBook Pro oo leh M1. Ka wanaagsan Windows awood badan
Apple waxay heshiis la gaadhay Skydance si loo abuuro filimaan firfircoon iyo taxane loogu talagalay Apple TV +
Apple iyo Skydance Animation waxay gaareen heshiis wadashaqeyn si ay ugu soo bandhigaan shaqadooda xigta Apple TV +
Waa kuwan waxa ku cusub macOS 11.3 beta beta
Beta labaad ee dadweynaha ee macOS 11.3 ayaa hadda la heli karaa kaasoo keena astaamo badan oo cusub oo dhinacyo badan oo Mac ah
Podcast 12 × 19: iPhone 13 iyo xan badan
Hal usbuuc ka badan ayaan kula wadaagaynaa Apple Podcast-ka oo aan ka noqon doono tifaftirayaasha waxaan ka imid Mac iyo Actualidad iPhone.
Saamiga suuqa Mac wuxuu kordhay 2 dhibcood laakiin waxaa la wareegay Chromebooks
In kasta oo xaqiiqda ah in saamiga suuqa ee macOS uu kordhay sannadka 2020, haddana waxaa ka sarreeyay Chrome OS
Dib u dhac cusub oo soo foodsaara mustaqbalka Apple Car. Mid ka mid ah aasaasyadeeda ugu waaweyn ayaa ka tagaya mashruuca
Dib udhac cusub oo ku yimid opera saabuuntii Apple Car Mid ka mid ah shaqaalihii ugu waaweynaa ee mashruucan ayaa ka tagay Apple
Apple Silicon M1 sidoo kale wuxuu la ildaran yahay weerarada Malware
Waxaa la ogaaday in Malware duug ah oo ay garaneyso Intel dib loo soo daabacay hadana ay macquul tahay Apple Silicon M1
Filim cusub oo loogu talagalay dokumenteriga Billie Eilish ayaa hadda la heli karaa
Kanaalka Apple TV + YouTube wuxuu kudarey trailer cusub filimka dokumenteriga ah ee kusaabsan Billie Eilish kaasoo lasoo bandhigi doono Febraayo 26
Shatiyadan cusub ayaa noo sheegaya suurtagalnimada aalado cusub oo loogu talagalay badbaadada gaariga Apple haddii ay iftiimiyaan
LastPass waxay joojin doontaa isticmaalka gebi ahaanba bilaashka ah ee maareeyaheeda faylka illaa Maarso 16.
Tijaabooyinka qaarkood ee processor M1X oo dahsoon ayaa soo baxa. Waxay ku jirtay CPU Daanyeer, halkaas oo ay ku muujineyso 1-core Apple M12X chip iyo GPU oo la hagaajiyay.
Apple waxay u abuurtay kaamkii ugu horreeyay ee madow ee aasaasayaasha iyo horumariyeyaasha ku dhex jira barnaamijkeeda Caddaaladda iyo Cadaaladda.
Xanta ku saabsan jiilka seddexaad ee AirPods waxay ka hadlaan naqshad AirPods Pro leh nuances qaar
Macluumaadka cusubi wuxuu cadeynayaa in Nissan laga tuuray lammaanaha Apple isla markaana Volkswagen aysan ka walwalayn gaariga Apple.
Su'aalo ku saabsan shaqada oo uu buuxiyey Steve Jobs ayaa loo xaraashayaa
Su'aalo ku saabsan shaqada oo uu buuxiyey Steve Jobs ayaa loo xaraashayaa. Horaa loo xaraashay seddex sano ka hor $ 175.000.
Had iyo jeer waa muhiim in la ogaado sida dib loogu bilaabo Mac-ga 'M1' haddii ay dhacdo inaan dhibaatooyin leenahay oo aan ka baxno.
Jon Prosser wuxuu mar kale sheeganayaa in soosaarida AirtAg ay dhici doonto waxyar iyo iPad Pro cusub
Sida loo habeeyo shaashadda guriga Safari ee macOS
Waxaan ku tusineynaa sida aad wax uga beddeli karto asalka boggaga Apple Safari adoo ku daraya sawir, wax alla wixii aad rabto
Warbixin cusub ayaa muujineysa in Apple ay heshay xuquuqda filimka ee filim cusub oo cinwaan looga dhigay Dolly.
At Nissan ma doonayaan inay ka haraan wadahadalada suurtagalka ah ee lala galayo Apple si ay u soo saaraan Apple Car
Waxaan ku tusineynaa fikrad cusub oo ah sida muraayadaha Apple-ga ah iyo kuwa la kordhiyay ay u noqon karaan.
Heshiiskii Apple iyo Hyundai wuu dhammaaday. Taasi waa sababta ay falanqeeyayaashu hadda u la yaabban yihiin cidda ku dhiiran doonta sameynta gaariga Apple?
Hal usbuuc ka badan oo aad dhammaantiin wada leedihiin Apple Podcast-ka. Toddobaadkan waxaan rabnay inaan ka jawaabno su'aalahaaga marka waad ku mahadsan tahay dhammaantood
TMSC waxay soo saartaa bandhigyo yaryar oo OLED ah oo loogu talagalay mustaqbalka "Apple Glass". Apple ma rabto inay ku tiirsanaato Samsung muraayadeeda mustaqbalka.
Sida Memoji loogu isticmaalo Mac-gaaga
Apple wuxuu na barayaa sida aan Memoji uga adeegsan karno Mac-gaaga. Fiidiyoow sharaxaad gaaban ayaa nagu filan
Saameynta isku-xirnaanta adduunka iyada oo loo marayo Mac-yada lagu sameeyay qalab aan caadi ahayn
Mashruuc lagu sameeyay agab kale oo halyeeyadiisu ay yihiin Mac ayaa looga golleeyahay in kor loogu qaado wacyigelinta Caalamiga ah
Mid kale oo ka mid ah mashaariicda mustaqbalka ee qoyska Clinton ayaa imaan kara adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan haddii aad raadineyso kaamirooyinka amniga guriga ayaa ah tan Anker eufyCam 2C kit
Intel wuxuu sii daayay isbarbardhig aan macquul ahayn oo ka dhexeeya processor-keeda iyo Apple Silicon. Isbarbardhigyadu waa nacayb
Xogta daadinta ee la xiriirta mustaqbalka Apple Car oo ay soo saartay shirkadda Kia ma ahayn inay si fiican u fariistaan ​​oo Apple ayaa hakisay wadahadallada.
wararka xanta ah ee cusub waxay tilmaamayaan in gaariga Apple la furi karo isagoon isteerinka isteerinku dareemin inuu iskiis u madax banaan yahay
Toddobaadka adag ee xagga wararka iyo cusboonaysiinta Apple. Noocyada beta ee la sii daayay waxay ku darayaan astaamo badan oo cusub laakiin wax badan ayaa jira
Xanta cusub ee ku saabsan muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ayaa tilmaamaya inay ku kici karaan 3000 euro oo ay ku jiri karaan laba shaashadood oo 8K ah
Waxaa suurto gal ah in $ 3.600 bilyan oo maalgashi ay Apple ku sameyso Kia si ay u dhisto "Apple Car". Waxaa lagu soo saari lahaa dhirta Kia-Hyundai ee ku taal Georgia (USA) laga bilaabo 2024.
Podcast 12 × 7: macruufka 14.5, diiwaangelinta iyo rikoodhka Apple
Waxaan wadaagnaa hal usbuuc ka badan Podcast-ka Apple kaas oo aan uga hadleyno wararka ugu muhiimsan ee beta beta iyo in ka badan
Apple wuxuu "kireystaa" madaxweyne ku xigeenka horumarinta jiifka ee Porsche. Manfred Harrer wuxuu ka tegey shirkadda 10 sano ka dib naqshadeynta gawaarida isboortiga.
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah falanqeeyayaasha caanka ah ee Apple, Apple Car wuxuu suuqa soo gali doonaa, ugu horreyn, 2025.
Apple TV 6, shatiyada Apple iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal wiig oo dheeri ah waxaan idinla wadaagi doonaa dhamaantiin wararka xooga leh ee aan ka imid Mac
Patent cusub oo ka tirsan Apple Watch ayaa ka digaya suurtagalnimada batariga dhaqaaqa si jawaabta xatooyada loogu siiyo isticmaalaha
Facebook ayaa lagu xantaa inay qorsheyneyso dacwad ka dhan ah Apple oo ku saleysan sharciyada kahortaga kalsoonida oo ku saleysan walaacyada gaarka ah.
Fiiri jiilkan 4-aad ee loo yaqaan iPod. Waxay ku dhex jirtaa shaashad midab leh, wifi, bluetooth oo waxay dheeshaa heesahaaga Spotify.
Rikoor cusub oo dakhli ah ayaa uga mahad celinaya iPhone 12, dharka la gashado iyo adeegyadooda. Natiijooyinka dhaqaale ee Apple
Apple waxay gaadhay rikoor dakhli oo cusub inta lagu gudajiro rubuckan ugu dambeeya sanadka waxayna kusii socotaa dhinac walba
AirTags-ka Apple ayaa laga yaabaa inay arkaan iftiinka maalinta dambe ee sanadkaan iyagoo tixgelinaya qalabka pre-sale ee Cyrill
Haddii uusan jirin Apple Car, maxay u rabaan shatiyadan?
Patent-ka ayaa caadi u ah Apple kiiskan waxaan ku aragnaa mid ay ku muujinayaan dhaqdhaqaaqa otomaatiga ah ee kursiga gaariga
Podcast 12 × 16: macruufka 14.4 iyo iPhone 13
Waxaan dhammaantiin idinla wadaageynaa dhacdo cusub oo ku saabsan Apple Podcast. Xaaladdan oo kale oo ka hadlaya wararka ku saabsan iOS 14.4, iPhone 13 iyo in ka badan
Phillip Caudell wuxuu abuuraa shaashadiisa 5K ee u gaarka ah isla qaabka iMac
Haddii magacaagu yahay Phillip Caudell oo aad u baahan tahay shaashad dheeri ah oo 5K ah oo loogu talagalay iMac-kaaga, adiga ayaa ka dhigi kara naftaada. Inta hartay waa inaan bixinaa ama aan raacnaa raadkooda
Xanta ugu dambeysay ee laxiriirta soo bandhigida jiilka labaad ee AirPods Pro, waxay tilmaameysaa bilaabis xagaaga kahor.
Qiyaasta gulukoosta dhiiggu waxay noqon kartaa hal talaabo oo dheeri ah oo loogu talagalay saacadaha Apple. Fikradani waxay ina tusaysaa sida uu noqon karo barnaamijka daawashada
Microsoft waxay ku shaacineysaa muuqaalkeeda 7 oo ah fiidiyoow isku day ah inay nacas ka dhigto MacBook Pro
Microsoft waxay ku dhawaaqeysaa dusha 7 ee fiidiyow xayeysiis ah iyada oo la adeegsanayo cilladaha (sida ay qabaan) ee macBook Pro
Waqtiga Socodka waa Apple Fitness + cusub oo soo bandhigi doona maqallo gaar ah
New Apple Watch Beta ayaa soo tabisay Tababar cusub oo loogu talagalay Apple Fitness + oo leh Muuqaal Cusub oo Maqal ah Waqtiga Socodka
Xanta cusubi waxay muujineysaa in Apple laga yaabo inay dib ugu laabaneyso asalkeeda oo ay markale ku dareyso kaarka SD-ka ee MacBook Pros
Hada u soo jeeso fikraddan cusub ee Apple Remote (oo aad loogu baahnaa isbeddel) saldhigga iPod Nano iyo watchOS
Waxay maareeyaan inay ku shaqeeyaan macOS Catalina iPad Pro 2020
Dulqaad badan iyo aqoon badan, waxay ku guuleysteen inay ka dhigaan macOS Catalina inay ku shaqeyso iPad Pro iyada oo loo marayo aaladda Hackintosh
Falanqeeyaha caanka ah ee Mark Gurman wuxuu ka hadlayaa ka bixitaanka suurtagalka ah ee dhowr sano ka dib Apple muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay iyo kuwa muuqaalka ah.
Kuwani waxay noqon doonaan qaar ka mid ah isbeddelada suurtagalka ah ee aan ku arki lahayn jiilka saddexaad ee AirPods iyo kan labaad ee AirPods Pro
Waxaan helnay fikradan watchOS 8 waxaanan u maleyneynaa in Apple dhab ahaan sax noqon doonto haddii ay ugu dambeyn run noqoto
Podcast 12 × 15: Gurman mar kale si adag ayuu u garaacay
Farxad ayey ii tahay inaan idinla wadaago dhammaantiin dhacdada cusub ee Apple Podcast ee bishaan koowaad ee Janaayo 2021
Xanta ku saabsan gaariga Apple waligiis ma joogsan doono oo naga yaabin kiiskan waa Kia Motors oo ka muuqda goobta
Ku dhowaad 300 jimicsi oo laga kala xusho Apple Fitness
Adeegga Apple Fitness + waxay ku dhow yihiin inay gaaraan 300 jimicsi oo la heli karo.
Marka loo eego xanta cusub, qaabka soo socda ee loo yaqaan 'Mac Pro' wuxuu noqon karaa kala bar cabirka midka hadda jira wuxuuna xasuusinayaa sheekada quraafaadka ah ee 'Mac Cube'
Sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo, dhamaadka Touch Bar waxay la imaan doontaa jiilka xiga ee 2021 MacBook Pro kala duwan
Sida laga soo xigtay warbixinno cusub, waxay u muuqataa in xeedhada MagSafe aysan ku xirnaan doonin oo keliya iPhone-ka. Waxaan ku arki karnay Mac-ga soo socda
Kuo ayaa shaandheeya astaamaha soo socda ee MacBook Pros. Wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah wararka xiisaha leh ee ku saabsan buugaagta dhamaadka-dhamaadka sare soo socda.
Apple waxay soo saartay dhacdadii ugu horreysay ee taxaneheeda Adeegga daqiiqado ka hor. Xilli ciyaareedkii labaad waa kan
Tufaaxa "dhirbaaxo" ayuu siiyaa Hyundai si uu ugala hadlo wax ka badan intii loo baahnaa
Tufaaxu wuxuu "dharbaaxayaa" Hyundai hadal badnidiisa. Hyundai waa inay ka baxdo oo ay wax ka bedesho weedhaheeda.
Apple waxay soo saartay trailer cusub oo ku saabsan taxanaha Night Planet: midab buuxa
OneDrive waxay dheereyneysaa cabirka ugu badan ee feylasha aan soo galin karno ilaa 250 GB oo ah 50 GB oo ah iCloud
Adeegga keydinta faylasha ee Microsoft wuxuu kordhiyay xadka ugu badan ee faylalka aan ku keydin karno OneDrive min 100 ilaa 250 GB
Apple waxay go'aansatay inay soo saarto Apple Car iyo macluumaadka xiriirka ee gawaarida korontada ku shaqeeya Canoo dhowaan soo shaac baxday
Podcast 12 × 14: Apple wuxuu ku bilaabmaa sanadka xoog
Fasaxyada ka dib waxaan la soo noqonaa baytariyo buuxa oo ah #podcastapple halkaana waxaan ku wadaagaynaa qaybtan koowaad ee sanadka
Dammaanadda AirPods Max kuma jiraan dhagaha suufka cusub haddii aan loo baahnayn
Apple ma beddeli doonto barkimooyinka dhagaha ee AirPods Max iyada oo la raacayo damaanad haddii aan loo baahnayn.
Sonos waxay soo bandhigeysaa xirmo durbaan dheeraad ah oo leh wax kasta oo aad ugu baahan tahay dadka ku hadla Sonos Move
Waxyaabaha ay soo saaraan qeybta saddexaad ee wata shahaadada Apple ayaa durba bilaabay inay la jaan qaadaan barnaamijka Raadinta, tani waxay albaabka u fureysaa AirTags
Waxaan horey u sheegnay in wararka xanta ah ee ku saabsan Apple Car (ama wax kastoo ay ku dhamaato in la yiraahdo) ay kaliya bilaabeen….
Waxay u muuqataa in wada hadaladii ugu horreeyay ee lala yeeshay Mercedes-Benz soo saarista Apple Car ay dhab yihiin oo iftiinka u soo baxayo
Xanta cusubi waxay muujineysaa in jiilka labaad ee AirPods Pro uu imaan karo bisha Abriil ee sanadkan
Warbixin cusub oo ku saabsan Apple Car waxay sheeganeysaa in iskaashiga Hyundai iyo Apple Cat la sii deyn doono 2024
Apple waxay horeyba u diyaarisay taxanaha cusub ee dhagarta iyo xiisaha nafsaaniga ah, luminta Alice. Mabda 'ahaan iyo haddii wax waliba socdaan ...
Warbixinta cusub ee falanqeeyaha Apple waxay sheeganeysaa inay u badan tahay inay bilaabi doonto adeegyo cusub oo Apple ah muddada gaaban
IMac-kii ugu horreeyay ee xilligii Apple Silicon ayaa la bilaabi karaa bisha Maarso. L0vetodream ayaa tan ku tilmaamaysa farriin xasaasi ah.
Shirkadda ku takhasustay kiisaska Mac, Apple Watch iyo aalado badan oo Apple ah, Casetify, ayaa ku dhawaaqday isbahaysi Disney.
Evan Blass ayaa sifeeya qaar ka mid ah sawirrada qalabka loogu talagalay AirTags ee shirkadda caanka ah ee Nomad. Miyay noqon doonaan qalab sax ah ama nooc horudhac ah?
Fikradda fikradda ah waxa jiilka soo socda ee AirPods u ekaan karaan, jiil imaan doona qeybta hore ee 2021.
Apple waxay sii deyneysaa Edition kooban oo ah AirPods Pro si loogu weyneeyo Sannadka Cusub ee Shiinaha
Apple waxay qadarinaysaa Sannadka Cusub ee Shiinaha iyada oo la soo saaray daabacaad kooban AirPods Pro oo leh sawirka astaanta Ox ee sannadkan cusub
Isticmaalayaasha Apple waxay ku qarash gareeyeen $ 1.800 bilyan barnaamijyada usbuucii ugu dambeeyay ee 2020
Isticmaalayaasha Apple ayaa 1.800 bilyan oo doolar ku qarash gareeyay barnaamijyada usbuucii ugu dambeeyay ee 2020. Ciyaaraha ayaa ahaa kuwa ugu badan ee la soo dejiyo.
Haddii aad hadda heshay Apple Watch cusub, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ayaa u qaabeeya sidaad u jeceshahay. Waxaa jira xulashooyin badan waxaanan ku tusinaynaa sida
Haddii hadda uun lagu siiyay ama aad siisay Mac-gaagii ugu horreeyay, moodeelku macno malahan. Tilmaamahan yar waxaad kuheleysaa waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato.
Saadaalinta uu sii daayay Ming-Chi Kuo ee ku saabsan warka Apple ee 2021 waa mid muxaafid ah oo aan u malaynaynin war.
Prosser wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka AirTags. Waxay muujineysaa fiidiyow 3D ah oo ah trackers "loo maleynayo" in ay sameysay Apple lafteeda.
Foxconn waxay umuuqataa inay kusoobireyso ganacsiga baabuurta korontada iyadoo maalgalinaysa shirkada Byton. Ma isu diyaarineysaa Apple?
Waxaan ku baraynaa sida aad Mac ugu bilawdo Apple Silicon adoo adeegsanaya banaanka haddii ay dhacdo inaad rabto inaad mid isku xirto oo aad daryeesho keydinta gudaha.
Saamile weyn oo Intel ah ayaa doonaya inuu dib ugu guuleysto Apple macaamiil ahaan
Saamile weyn oo Intel ah ayaa doonaya inuu dib ugu guuleysto Apple macaamiil ahaan. Wuxuu doonayaa Intel inay ka tagto wax soosaarka si ay diirada u saarto naqshadeynta.
Sida ku xusan wararka xanta ah ee soo ifbaxay, tani waa waxa naga sugaya 2021 shirkadda Apple ugu yaraan xagga qalabka